IKwaZulu-Natal isehluleka ukwebuza ekubeni yinkundla yokubulalana – Bayede News
IKwaZulu-Natal isehluleka ukwebuza ekubeni yinkundla yokubulalana
Phezu kwemizamo eyahlukene yokuzama ukulungisa isithombe sesifundazwe iKwaZulu-Natal njengendawo engu-‘alubhadwa nenodlame’ izigameko zakamuva zikhomba ukuthi kulukhuni ukwenza njalo
“Ubandlululo nobukoloni kuhaqe izwe lethu ikakhulukazi KwaZulu- Natal, okuyisiko elibuhlungu lodlame. Lokhu kubulalana kusobala kwenzeka ngoba kukhombisa inhlanganisela eyinkimbinkimbi yokubuna kwepolitiki, ukudodobala kwendlela yokuziphatha neyokuhlalisana, ubugebengu nokuncintisana okubi ngezinsiza nokulawula kwezomnotho nakwezezimali,” lawa ngamagama ashiwo nguNdunankulu waKwaZulu-Natal uMnu uSihle Zikalala eqala isethulo sakhe kuKhomishini eyabe iphenya izigameko zokubulawa kosopolitiki KwaZulu-Natal.
Eminyakeni engama-25 eyedlule cishe yonke imibiko ibibeka lesi sifundazwe njengenkundla yodlame kulandela ukubhixana phakathi kwe- African National Congress (ANC) ne-Inkatha Freedom Party (IFP). Kule mpi bambalwa abaphika isandla sesithathu ngoba kwavela ukuthi umbuso wamadlagusha wabe unesandla ukuxova aboHlanga nabagcina sebeqobana bodwa. Kulolu dlame ngokwemibiko kuthiwa kwasala enkundleni abantu ababalelwa ezi-20 000 ngesikhathi umkhonto ugwaza ekhaya
Nxa kufundwa imibiko nomlando walolu dlame okuba sobala yikuthi akuyona iKwaZulu-Natal enodlame njengoba nakwezinye izifundazwe belubikwa, mhlawumbe okwehlukile ngeleNdlovukazi uMthaniya yisihluku esibonakala ngesikhathi kubulawa abantu. Babodwa ababhujiswa ngomlilo, abaklajwa babe yizibhucu, abathelwa ngethala lezinhlamvu nabashumpulwa amakhanda kuthathwe nezitho zabo. Akulona lolo kuphela ngoba nolwasematekisini kanye nezimpi zezigodi nazo zikhipha okunyantisayo kulesi sifundazwe. Olwalapha luhlula amakhomishini njengoba zidlana ngisho kusaphenywa.
Ubufakazi balokho bubonakele ngesikhathi kunesithangami esabe siholwa ngu-Advocate uBoyce Moerane ezadlana khona kusaphenywa. Lena eyenzeka emzini iGlebe kayigcinanga lapho ngoba kwale ngisho sekufike uMvikeli WoMphakathi uSolwazi uThuli Madonsela naye ethi ubhula umlilo kwacaca ukuthi lapha kukwenye indawo ngoba izinsizwa zikushaya zikwazi.
Lolu lunya lubonakele nangesikhathi uMnu uSibusiso Mpungose egila amalumbo ngesikhathi eqotha izingane zakhe zonke ngokuphazima kwezo. Kuleli sonto iNkantolo Enkulu eMgungudlovu igwebe uKhuba odilikajele abane. INkantolo ithe ungumuntu ongenazwelo nongenandaba nempilo yomunye umuntu ngisho namathumbu akhe.
Ukuqotshwa kosopolitiki kube sematheni nje yingoba bekwenzeka kweleNdlovukazi uMthaniya futhi ababulali bebengakhethi ngoba umkhonto bebewufaka kumfazi bawufake endodeni kusale kukhalwa
Izindawo ezifana naseThekwini uMkhandlu uze wangena ezindlekweni uzama khona ukuvikela amakhansela. Kwezinye izindawo abantu ababanga nanhlahla.
Kabanga nanhlanhla uMnu uSbuyiselo Dlamini owabe yikhansela le-IFP eZululand ngesikhathi ethelwa ngethala lezinhlamvu.Kanjalo noMnu uMaqatha Mchunu we-ANC eMgungundlovu kwaba ngesifanayo. Baningi nabanye.
Okofakazi kubikelwa amagwababa
Osekungenise muva nje kungaqali yilokhu kokungavikeleki kofakazi emacaleni anzima. Yize okusematheni kuyilokho okuthinta uMnu uThabiso Zulu owayesondelene nomufi uMnu uSindiso Magaqa buningi ubufakazi bokushishibezwa nokubulawa kofakazi emacaleni athile kusuka kwawobulili nathinta osopolitiki. UZulu nanamuhla usakhala ngokungabi nabaqaphi emuva kokunika ubufakazi obuthinta udlame oludla osopolitiki kwaZulu-Natal. Emasontweni amabili edlule kubikwe ukuthi usinde ekudutshulweni.
Omunye osehamba ejeqeza nguMnu uNkosinathi Mbopha Chiya nowayethinteka ekubulaweni komunye wosopolitiki ababedumile kwaZulu- Natal uMnu uThomas Mandla Shabalala nowayengumholi we-IFP. UChiya usephuma kobukhulu ubunzima emuva kokugwetshwa udilikajele ngowezi-2006 ngecala lokubulala uShabalala
nokwathi ngokuhamba kwesikhathi kwatholakala obunye ubufakazi nokwenza wakhululwa ejele. Leli phephandaba selingakuqinisekisa ukuthi ngomhla zili- 15 kuMfumfu nonyaka kube nemizamo yokumenzakalisa uChiya njengoba kwabo kuhlasele abantu abangaziwa abagasele kwesikabhadakazi bafike bavulela ngenhlamvu ewindini lekamelo abelele kulona.
Ekhuluma nelaboHlanga uChiya nobekade esekubhaceni ngemuva ngokuhlaselwa ekhaya uthi ukuhlaselwa kwakhe kuhlobene necala lokubulawa kukaShabalala. “Angingabazi ukuthi abahlaseli babeqonde mina njengoba bedubule baqondanisa newindi lekamelo engilala kulona. Ngicabanga ukuthi isono sami sokuba ngifunwe uthuli ngababulali yingoba ngonyaka odlule ngibhalele owayenguNgqongqoshe Wezomthetho noKuhlumeleliswa Kwezimilo, uMnu Michael Masutha ngifuna angenelele ngenxa yokuthi amaphoyisa ahudula izinyawo ekwenzeni uphenyo njengokomyalelo weNkantolo Enkulu yaseThekwini eyathi awaphenye ukuze kuboshwe ababulali bangempela bakababa uShabalala, “kusho uChiya.
UChiya uthi akangabazi ukuthi ukuhlaselwa kwakhe kuhlobene necala lokubulawa kukaShabalala.
“Kukhona abazama ukungithulisa ukuze leli cala ligcine liphelele emoyeni. Phela ukuqhubeka kwalo kungase kugaxelise abaningi abathinteka ekubulaweni kukababa uShabalala njengoba kwabhecwa mina ngalo,” kuqhuba uChiya.
Lezi zehlo nezinye eziningi zenza kube lukhuni satshe ukuqeda isithombe esingesihle ngeKwaZulu-Natal. Okubi kulokhu yikuthi uhulumeni wesifundazwe nsuku zaphuma uqhuma imikhankaso nezinhlelo ezibeka lesi sifundazwe njengendawo enokuthula nekulungele ukusebenza nabatshalizimali.
UZikalala usigoqa ngokuyikho lesi simo lapho ethi: “Ngeke sibe silokhu siyingxenye yenkumbulo ebuhlungu yokwaziwa ngenkundla yokubulalana yaseNingizimu Afrika.” Ukuqinisekisa lokhu akuwona umsebenzi kaHulumeni kepha ngowezakhamuzi nezinhlaka zomphakathi. Omunye umbiko nguMandla Zulu
Posted in S-three, Ukuhlaziya